१८५ नपामा ‘एकीकृत शहरी विकास योजना’ | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर १८५ नपामा ‘एकीकृत शहरी विकास योजना’
१८५ नपामा ‘एकीकृत शहरी विकास योजना’
योजनाको खाका बनाउन साढे ९१ करोड, एक शहर विकासको औसत लागत रू. ५ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले सात प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकामा ‘एकीकृत शहरी विकास योजना’ लागू गर्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले योजनाबद्ध ढङ्गले नगरपालिकामा शहरको विकास गर्ने योजनासहित सात प्रदेशका १ सय ८५ ओटा नगरपालिकामा यो योजना लागू गर्ने भएको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले परामर्शदाता छनोट गरी योजना बनाउने तयारी गरेको छ ।
ती परामर्शदाताले केही समयमै नपाहरूमा निर्माण हुने शहरको विस्तृत योजना तथा नक्सा, डिजाइनलगायत आधारभूत विषयहरूबारे जानकारी दिनेछन् । मन्त्रालयले सात प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकामा निर्माण हुने शहरको खाका तयार गर्न प्रतिनगरपालिका रू. ५० लाख लागत लाग्ने जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक डा. रमेश सिंहले सबै नगरपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार विकासको योजना/खाका तयार गर्न कुल रू. ९० करोड ५० लाख लागत लाग्ने बताए । उनले भने, ‘ती नगरपालिकामा शहर विकास गर्ने खाका तयार गर्ने परामर्शका लागि प्रतिनगरपालिका रू. ५० लाख आवश्यक पर्छ भने एक नगरपालिकामा एक शहर विकास गर्न औसतमा रू. ५ अर्ब लागत लाग्ने आकलन गरिएको छ । नगरपालिकाको आकार, जनसङ्ख्या र क्षमताका आधारमा लागतको यकिन हुनेछ ।’ सरकारले पूर्वाधारसहितका शहर विकास गर्ने उद्देश्यले ‘एकीकृत शहरी विकास योजना’ तयार गरेको हो ।
अहिले ती नगरपालिकामा शहरको नक्सा, डिजाइन तथा लागतको मूल्याङ्कनका लागि परामर्शदाताले काम अघि बढाएका छन् । यसभन्दा पहिला मन्त्रालयले सात प्रदेशका विभिन्न ९० ओटा नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हाल त्यसलाई संशोधन गरी मन्त्रालयले १ सय ८५ ओटा नगरपालिकामा शहर विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । ती परामर्शदाताले यी नगरपालिकाको शहरी विकासका लागि करीब २ महीनामा प्रतिवेदन दिने तयारीअनुसार गृहकार्य अघि बढेको महानिर्देशक सिंहले बताए ।
मन्त्रालयले तयार गरेको पहिलो ९० नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं. क्रमशः १ मा १६, २ मा २०, ३ मा १०, ४ मा ८, ५ मा १४, ६ मा १० र ७ मा १२ ओटा नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा अहिले संशोधन भएर १ सय ८५ ओटा नगरपालिका पुगेको छ । ती नगरपालिकामध्ये कुन प्रदेशमा कति भन्ने तथ्याङ्क भने उपलब्ध हुन सकेन ।
मन्त्रालयले व्यवस्थित र पूर्वाधार सम्पन्न शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेअनुसार ती शहरको विकास गरिने भएको हो । सङ्घीयता लागू भएसँगै विकास भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार नभएको भन्ने गुनासोबीच मन्त्रालयले ती नगरपालिकामा शहर विकास गर्ने उद्देश्यले योजना लागू गरेको हो ।
सोही योजनाअनुसार ती नगरपालिकाका शहरमा एकीकृत पूर्वाधार विकास गरी सडक, खानेपानी, ढल, बसपार्क, पार्किङ स्थल, तरकारी बजारलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । योजनाअनुसार एकीकृत रूपमा शहर विकास गरिने भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा समस्या नहुने देखिएको छ । हाल नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये महा/उप/नगरपालिकाको सङ्ख्या २ सय ७६, गाउँपालिकाको सङ्ख्या ४ सय ६० रहेको छ ।